Gaaffiin Barsiisotaa gaaffii Cunqurfamoota hundaa waan ta’eef, cunqurfamoota biyyattii hundarraa itti-hirmaannaatu barbaadama! | Biiftuubilisummaa
← Gaaffii mirgaa kaasudhaan Sochiin barsiisotni magaala Finfinnee eegalan gara naannolee adda addaattis babal’achuu eegaleera.
Miseensonni OPDO Wal harcaasutti kaate! →
Gaaffiin Barsiisotaa gaaffii Cunqurfamoota hundaa waan ta’eef, cunqurfamoota biyyattii hundarraa itti-hirmaannaatu barbaadama!
Posted on April 3, 2012	by biiftuubilisummaa
Mootummaan Wayyaanee gaaffii mirgaa karaa nagaa ka’u kamiifuu yeroon itti deebii karaa nagaa kennite seenaa ishii keessatti mul’atee hin beeku. Isa kanaaf immoo gaaffii ummanni Oromoo, keessayyuu barattootni Oromoo baroota dheeraaf karaa nagaa gaafachaa turaniif tarkaanfii humnaa wayyaaneen fudhachaa turtee fi ammas itti jirtu raga gahaadha. Har’as gaaffii mirgaa barsiisonni biyyattii karaa nagaa kaasaa jiraniif deebiin mootummaa Wayyaanetin kennamaa jiru tarkaanfii humnaa kan ta’e hojiirraa ari’uu fi hidhuu ta’eetu muul’ataa jira.
Kana waan ta’eef:
Mootummaan Wayyaanee tarkaanfii duula hojiirraa ari’uu fi hidhuu barsiisota irratti bantee jirtu hatattamaan dhaabdee, gaaffii barsiisotaa karaa nagaa deebii akka laattu akeekkachiisaa, kun ta’uu baannaan, nutis qabsoo barsiisotaa kanatti makamudhaan tumsa barbaachisu hunda akka goonuu fi itti-gala gaaffii barsiisotaa milkeessuuf qophii ta’uu keenya ammumarraa ijjannoo keenya beeksifanna!
Gaaffii Barsiisotni biyyaattii kaasaa jiran kun kan ummattoota cunqurfamoo biyyattii hunda ilaallatu waan ta’eef, Wareegama barsiisonni kaffalaa jiran kana irraa salphisuuf cunqurfamoonni biyyattii hundi qabsoo barsiisotaa kana akka tumsan waamicha goona.
Hawaasni Idl-addunyaa, biyyootni fi embaasiiwwan Finfinnee jiran iyya barsiisota biyyattii kanaaf sagalee ta’uudhaan Mootummaa Wayyaanee irratti dhiibbaa barbaachisu akka taasisan dhaamsa dabarfachaa, miidiyaaleen adda addaas sagalee barsiisotaa kana darbaa-dabarsudhaan dirqama ogummaa akka bahan waamicha goona!
Sochiin barsiisotaa kun qabsoo ummanni Oromoo gaggeessaa jiru keessaa qaama tokko waan ta’eef, ummanni Oromoo, addatti qabsaa’onni Oromoo dhimma kana xiyyeeffannoo guddaa itti kennudhaan Warraaqsi barsiisotaa kun galii isaa irraa akka hin jajal’ifamne eegudhaan gaaddisa qabsoo Oromoo jalatti tiksuu fi sarara kanarratti qajeelchudhaan qooda akka bahan dhaamsa dabarfanna!
Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9, Caasaalee KQWUO hunda biratti sagantaa adda ta'een kabajame
Guyyaan Yaadannoo FDG Sadaasa 9, Caasaalee KQWUO hunda biratti sagantaa adda ta’een kabajame
Suuraalee Irreecha Bishooftuu Fi Sochii Warraaqsaa, Fulbaana 30,2012
Ayyaana Irreessaa irratti Oromoonni nagaa waraana TPLFn hidhaman 150 ol ta’uun beekame.Qabeenyi hedduu fi uffanni aadaa Oromoos walumaan hidhame.
KORA QINDEESSAA WARRAAQSA UMMATA OROMOO (KQWUO)
The Big DayJanuary 22nd, 2012